Yintoni i-Psychic | Amandla e-Psychic, Amandla, kunye noFundo - Amandla Engqondo
Amandla e-Psychic, Amandla, kunye noFundo
Iposwe nge by
Ukusuka kwi-Oracle eDelphi ukuya kwi-Fox Sisters ukuya kwi-New Age intshukumo kuye kwakho iingqondo kunye namabali oosiyazi. Kodwa lithetha ntoni kanye kanye igama elithi 'psychic'? Ukongeza, yintoni ngu Ingqondo - ngokwenene?
ifika nini kwakhona i-halley's comet
Igama elithi 'Psychic' livela kwigama lesiGrike elithi 'psychikos'; Oko kukuthi 'komphefumlo'.
'Ingqondo' ngumntu oqokelela / aqwalasele ulwazi oluvela kwisithuba esingaphaya kweemvakalelo zethu ezintlanu. I-psychic inxibelelana 'nengqondo yakhe yesithandathu'. Ngokuchanekileyo indlela abayenza ngayo le nto kwaye ibonakalisa njani ixhomekeke emntwini. Abanye bathabatha amandla ngokusebenzisa i-psychometry (ukuchukumisa into kunye nokwazi malunga nokudlulileyo kwayo, umzekelo). Abanye banokuba namandla e-psychic ye-clairvoyance okanye ukubukela okude okubaxelela ngabantu kunye neendawo ngaphandle kokunikwa naluphi na ulwazi kwangaphambi koko. Okunye kusenokwenzeka ukuqikelela iziganeko ezizayo.
Oosiyazi ngabantu abangazange baluthintele olo lwazi. Okanye, ukuba babenqanda ubuchule babo bendalo, bafumana iindlela zokunxibelelana kwakhona nendlela ekhethekileyo yokubona ngaphakathi nangaphaya kwesigqubuthelo (njengakwimeko yonxibelelwano lomoya). Nje ukuba wazi ukuba yintoni elahlekileyo kulula ukuyifumana- ungoyiki ukufikelela ngaphakathi kwaye ubone ukuba yeyiphi imimangaliso oyifumana kubuncwane boMoya wakho womoya.
Nokuba siphi na isipho somoya, olu hlobo lokwazi ngamanye amaxesha, lunokwenza abantu boyike kwaye balumke. Ingabonakala ngathi amandla e-psychic angaphandle kwesiqhelo kwaye unokuziva ungonwabanga. Le mpendulo iyinyani ngokukodwa xa ulwazi oluchanekileyo luvela kumntu ongaziwayo okanye ngokungalindelekanga ukusuka ekuqondeni kwakho, iphupha, ingqondo kunye nokunye. Ukuba uzibalela phakathi kwabagxeki okanye abo bangaqinisekanga malunga nomxholo wonke, eli nqaku linokubeka ingqondo kunye nentliziyo yakho ekuphumleni.
Ngaba iiPsychics zazi njani izinto
Okokuqala, masiqale ekuqaleni. Zonke izinto eziphilayo zinamandla. Amandla anepateni. Le patheni inxibelelana nezinye iipateni kwihlabathi liphela nangaphaya. Kwimeko yabantu amandla ethu nawo aneepateni zesiqhelo eziphindayo. Njengokongeza olunye ungqimba lwepeyinti, oko kwenza ipateni ibe nesibindi / yomelele (okt ngokulula ngakumbi). Kwimo yayo esisiseko, ubuchwephesha bengqondo okanye 'amandla' amandla okuqonda ezo patheni. Oku kubandakanya ukubanakho ukulandela iipateni zamandla ukuya kwisiphelo sabo esisengqiqweni nesinomdla (ingqondo isebenza kuwo omabini amanqanaba, nomoya wethu).
Kuba yonke into ephilayo nengaphiliyo inamandla okushukuma, oosiyazi banako 'ukuziva' (iClairsentience) okanye 'bazi' (Imilingo) iimvakalelo, iingcinga, iinjongo kunye nokunye. Ngoba? Kungenxa yokuba yonke into esiyicingayo, esivakalelwa ngayo, esiyithethayo, kwaye siyenzayo idala umbane. Kanye njengokuba iselfowuni ikhupha umbane okanye iipateni zokungcangcazela ezifunyanwa ziinqaba zeselfowuni kwaye, emva koko, 'ziphinde zenziwe' kumagama esiwavayo ngezithethi zethu zefowuni- le 'yindlela' oosiyazi abava ngayo, abaziva ngayo, kwaye babone ukubonakala kwengqondo 'thetha' ukwenza imimoya (emzimbeni).
virgo umfazi kunye sagittarius ukuhambelana kwendoda
Awungekhe uyikholelwe, kodwa uneempawu zengqondo onokuthi ungaziboni unjalo. Ngaba wakha waziva ulusu olukugcina ngaphandle kwengxaki? Ukhe wazi ukuba ngubani obizayo (ngaphandle kwe-ID yomnxeba) Okanye kuthiwani ngokungena egumbini kwaye uzive unoxinzelelo okanye uvuyo, nangona kungekho namnye umntu okhoyo? Intetho endala, 'ukuba iindonga zingathetha' zibophelela kwiipateni zamandla. Kuyo yomithathu le mizekelo 'uzilungisile' -umahluko kuphela kukuba uyenzile ngaphandle kwenjongo.
Abasebenza ngokukhanyisa, iiShamans, iiClairvoyants, ii-Intuitives, iiSensitives - zonke zisixelela ukuba kuninzi ehlabathini kunoko kudibana neliso. Aba bahambi bokomoya bakwathetha ukuba wonke umntu unengqondo ethile. Njengayo nayiphi na italente, nangona kunjalo, ifuna ukukhula kwaye ayinguye wonke umntu onenqanaba elifanayo lesakhono. Ukusebenzisa umzekelo oqhelekileyo, unokuzingela uze ukhangele xa omnye umntu echwetheza amagama angama-80 ngomzuzu. Yinto efanayo esisiseko kumanqanaba ohlukeneyo okuziqhelanisa nobuchule. Iimpawu zengqondo zisebenza kanjalo. Cofa ukufumana ulwazi oluthe kratya kumbuzo, 'Ngaba ndinguPsychic' .
Ngubani Okholelwa kwiiPsychics
Abantu bakudala babebazi ubuchule bengqondo, kwaye kwezinye iisetingi babexhomekeke kakhulu kubo. Abavumisi ngeenkwenkwezi, abavumisi, abavumisi nabaprofeti ngokufanayo babonakalisa ubuchule babo ngeendlela ezahlukeneyo. Iinkokeli ezininzi zazinomntu ocacisayo okanye enye i-psychic njengomcebisi kuRhulumente. Omnye weyona mizekelo idumileyo yokuprofeta yi-Delphic Oracle apho umfundisikazi ehambisa amagama kunye noqikelelo luka-Apollo ngexesha lesiko elikhethekileyo. Amanye amanani kwimbali yezengqondo kubandakanya uNostradamus, uEdgar Cayce no-Helena Blavastsky.
Ukukhawuleza ukuya ku-2005 ngelo xesha I-Gallup Poll Utyhile ukuba phakathi kwama-26 nama-41 eepesenti yabemi bakholelwa kuhlobo oluthile lweziganeko zengqondo (umahluko uvela kwisiphi isipho ekuthethwa ngaso). Oku akuthethi ukuba kuya kufuneka utsibe kwiqhalo lomzekeliso, kodwa kusinika ikhefu. Uluntu luthembele kwizangqondo ngayo yonke into ukusuka ekukhuleni kwezityalo ukuya ekuthatheni izigqibo eziphambili kwezopolitiko amawaka eminyaka. Ngoku kubonakala ngathi siphinda sinxibelelana kunye neengcambu zomoya kunye nengqondo yengqondo kwakhona.
Kutheni le nto ii-scorpios zitsaleleka kwi-libras
Unokuzifumana uzibuza ukuba kutheni abantu abaninzi bengasebenzisi amandla abo endalo, kukushiya uye kwingcali yezengqondo ukuze ubonisane. Impendulo koku ilula. Ukususela ebuntwaneni sihlala sikhuthazwa ukuba sisebenzise ukucinga kunye ne-intuition. Njengabazali baxelela umntwana ukuba athule amazwi kunye nezenzo zabo zangokwemvelo, isebenza njengesiphatho kwitepu yasekhitshini ngokuthe ngcembe ivaliwe.
Olu ngeno lwaluthunyelwe kwi Amandla e-Psychic, Amandla, kunye noFundo . Yenza i Bookmark kwi unxibelelwano . Epreli Horoscope 2017 Ngaba ndinguPsychic
Indoda ye-capricorn kunye ne-pisces yomfazi othandweni
Ngaba ii-scorpios kunye ne-libras ziyavana